Iran: Fijoroana vavolombelona amin’ny fampijaliana sy fanolanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2009 7:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, polski, Italiano, bahasa Indonesia, English
Tsy zavatra vaovao any amin'ny fonja iraniana ny fanolanana sy fampijaliana. Kanefa ny zavatra niseho vao tsy ela izay no nitarika ny sain'ny rehetra hijery manokana ny fonja any amin'ity repoblika islamista ity. Iraniana maro, anisan'izany ilay lehiben'ny mpanao sary mihetsika antsoina hoe Reza Allamehzadeh, no mampiasa ny fampahalalam-baovao avo lenta hamoahana ireo fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra iainana any Iran.
Mpanao fihetsiketsehana an'arivony nosamborina ny volana jolay lasa teo, nisy tamin'izy ireo izay mbola naratra, no nalefa tany amin'ny fonja na tany amin'ny toerana fampijaliana antsoina hoe Kahrizak.
Indro ny fijoroana vavolombelona nataon'ny sisa velona izay navoaka tamin'ny bilaogy isan-karazany: